Xiaomi Mi Roborock S50 ဖုန်စုပ်စက် - စက်မှစျေးနှုန်း ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » Xiaomi က Mi Roborock S50 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
အစအိမ်Xiaomi က Mi Roborock S50 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 2019 ဒီဇင်ဘာ58: 37
စျေးနှုန်းသမိုင်း roborock S50 စမတ်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
€ 324,49 - 20194ဒီဇင်ဘာလ
€ 306,46 - 2019 27 နိုဝင်ဘာလ
€ 315,48 - 2019 20 နိုဝင်ဘာလ
€ 324,49 - 2019 14 နိုဝင်ဘာလ
€ 306,46 - 2019 10 နိုဝင်ဘာလ
€ 315,48 - 20192နိုဝင်ဘာလ
€ 342,52 - 2019 စက်တင်ဘာလ 6
€ 351,53 - 2019 31 သြဂုတ်လ
မှ: ဒီဇင်ဘာလ 2018 13
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 605,14 - 2019 1 ဇန်နဝါရီ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 306,46 - 2019 10 နိုဝင်ဘာလ
စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်စမတ် roborock S50
Xiaomi က Mijia Roborock တစ်ခုမှာစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်သဖွယ် - စက်ရုပ်သည် Mi2နိုင်ငံတကာဗားရှင်းပျော်စေ
50 သည် Mi သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ် - Xiaomi က Mijia Roborock S2 တစ်ခုမှာစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်2သဖွယ်
မူရင်း Xiaomin Mijia Roborock စမတ်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်2In-ကြုံး 1-နှင့်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ် LDS နှင့်ရှုံ့ချ ...
Xiaomi က Mijia Roborock တစ်ခုမှာစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်သဖွယ် - စက်ရုပ်သည် Mi2ပျော်စေ
Xiaomi က Mijia Roborock S50 စမတ်မူလစာမျက်နှာဖုန်စုပ်စက် 2nd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ --- နိုင်ငံတကာဗားရှင်း
Options ကို: ကိုဖုနျစု, ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်
စုတ်ယူခြင်းပါဝါ (pa): 2000pa
Galia (W) 58W
ဗို့ (V) 100 - 240V
running အချိန်: 2.5h
Xiaomi က Roborock S55 (Black က) လုပ်ဆောင်ခြင်း, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သန့်ရှင်းရေးစမ်းသပ်ခြင်း
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Xiaomi က Mi Roborock S50 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
mi စက်ရုပ်သန့်စင်, ဘက်ထရီ: 14.4V, 5200mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု: Wi-Fi ကိုအစာရှောင်ခြင်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဗို့ဆီသို့မတ်: 14.4V, အမှတ်ပေးထားပြီးပါဝါ: 58W, အလုပ်လုပ်အချိန်: 2.5H, စုတ်ယူခြင်း: 2000Pa, အထိုင်, ပါဝါအားသွင်း: 42W, Input ကိုဗို့အား : ~ 100 240V, Output: 20V - 1.8V, ကြိမ်နှုန်း: 50 / 60 Hz Dimension: 136.5 130 98 မီလီမီတာ x x ကို
Dimension & အလေးချိန်
Producct အလေးချိန်: 3.5kg, prodcuts Dimension မှာ about: 353 350 96.5 မီလီမီတာ x ကိုက x
1 2, 1 အထိုင်, ပါဝါ Cable ကိုအားသွင်း x သည် Mi စက်ရုပ်သန့်စင် 1, 1 Water tank x x x, ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ် 1 က x, 1 (အင်္ဂလိပ်) လက်စွဲစာအုပ် x
Xiaomi က Mi Roborock S50 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ 15 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Xiaomi က Mi Roborock S50 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
muchos Grazia - ဇွန်လ 2019 10
ငါတစ်နှစ်ကျော်ကျော်များအတွက် Xiaomi ကလေဟာနယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့င်။ ငါကြည့်အပေါင်းတို့နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပါတယ်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါ (ဘာသာပြန်ထားသော) လက်စွဲကိုဖတ်ပါတယ်။ အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လမ်းညွှန်များသည်အခြားစက်ရုပ် vac နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ငါနေ့တိုင်းယခုအကြောင်းကို2ပတ်အသုံးပြုပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်သစ်မာနှင့်နှစ်ဦးကိုကြောင်တွေနဲ့အကြီးစား Multi-ကြမ်းပြင်အိမ်သူအိမ်သား။ လူတစ်ဦးသည်စင်ကြယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အဒါဟာခက်ခဲတယ်။ အရာနှစ်ခုဝယ်မှငါ့ကိုစောင့်လေ၏။ 1, စျေးနှုန်း (gearbest ရွတ်) ထို့နောက်အခြားနေရာများတွင် 2, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထောက်ခံမှုကင်းမဲ့ခြင်းတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းရှိသည်။ ကိုယ့် $ 400 ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်ရေကြောင်းနှင့်တာဝန်နှင့်အတူရုံ $ 500 ကျော်ကဆင်း brought` ဘယ်တို့သည်ကြီးစွာသောလျှော့စျေး (CDN) တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်အပေါ်လဲ။ Xiaomi ကလည်းမကြာသေးခင်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထောက်ခံမှုနှင့်အင်္ဂလိပ်အသံပါအထုပ်ကဆက်ပြောသည်။ ငါကမြင်သည်အတိုင်းငါအကောင်းဆုံးအချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ နံပါတ် 1 AI အရှာတွေ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတောက်ပသွေးထွက်သံယိုပါပဲ။ စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးဆင်းလက်။ Lidar အခန်းထဲမှာနေရာစကင်နှင့် 30 '' ရင်ပြင်တစ်ဇယားကွက်သို့သန့်ရှင်းရေးပုံစံ၏ပျက်ပြား။ ပထမဦးစွာထို့နောက်အပြင်ဘက်ပတ်လည်အတိုင်းအတာပုံဖော်ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုဇုန်ကိုဖြတ်ပြီးတစ် switchback ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း။ ဒါကြောင့်စသည်တို့ကိုတစ်ကုလားထိုင်ခြေထောက်ရင်ဆိုင်လျှင်, ထို့နောက် "ကလမ်းကြောင်းရဲ့အတွင်းဆက်လက်ပတ်လည်စက်ဝိုင်းပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်နီးကပ်နီးကပ်အများအပြားအခက်အခဲများကိုသွားလာရှိပြီးမည်သည့်အစက်အပြောက်လက်လွတ်မထားဘူး။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ပရိဘောဂအပေါ်လူမျိုးခြားပါပဲ။ ဒါဟာစောင့်ကြည့်ဖို့အတော်လေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ အဲဒါကိုလမ်းတဝိုက်လှည်ဒေသများရဲ့စဉ်းစား Pathfinders သကဲ့သို့သငျစာသားကမြင်နိုင်ပါသည်။ ဂရိတ်ဘက်ထရီစွမ်းရည် (ကျနော် 8 သတ္တုတွင်းအမည်ရှိင့် BB-ငါတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးကို BB-8 အသံပါအထုပ် hacks! မျှော်လင့်ပါတယ်) ။ တစ်တာဝန်ခံလိုအပ်ပါသည်ရှေ့မှာအတော်လေးခဏသွားစောင့်ရှောက်နိုင်ဒါနဲ့ "မျှမျှတတ" setting ကိုအပေါ်ကိုဖုနျစုအနေနဲ့ 84min ပြီးနောက်, ငါ့ဘက်ထရီအကြောင်းကို 54% တာမျိုး။ အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုမှာအရာတစုံတခုကိုမျှဖော်ပြထားခြင်း (အနည်းဆုံးငါကြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ) သငျ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ဒါမှမဟုတ် vac ကို run ရန်သင့်ဖုန်းတွင် App ကိုသုံးစွဲဖို့မဖြစ်။ ငါစာသားချ Chargers ဆန့်ကျင် vac ထား, ထိုအားသွင်းအခြေစိုက်စခန်းထဲမှာပလပ်တစ်ခုကို unpacked ပေါ်မှာလှည့်နှင့်ထိခလုတ် "တန်ခိုး / start" နှင့်အဲဒါကိုငါ app ကို download လုပ်င်တောင်မှမတိုင်မီသံသရာသန့်ရှင်းရေးရဲ့စတင်ခဲ့သည်။ app ကိုအပေါ်သန့်ရှင်းရေးလမ်းကြောင်းကိုအကဲခတ်, အတန်ငယ်တစ်အသစ်အဆန်းများစဉ်အခါ, vac နေဆဲရှင်းလင်းတယ်ရဲ့အဘယ်မှာရှိ vs သန့်စင်ထားပြီးဘယ်မှာသိရန်တကယ်တော့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူအဖြစ်ကောင်းစွာအားသွင်းအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူအခြားအထပ်ယူသွားနှင့်ချက်ချင်းပင်သန့်ရှင်းရေးစတင်နိုင်ပါသည်။ ကော်ဇောပေါ်အဖြစ်ကောင်းသောသို့သော်အလွန်ထိရောက်သောမဟုတ်သစ်မာပေါ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်, အဘို့ကြီးသော။ သငျသညျအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရရှိပါသည် အကယ်. သင်ကစဉ်းစားကြည့်ပါပါ။ မဟုတ်မဆို vac, vac ဒီနည်းကို။ ဒါဟာလမ်းကြောင်းကို-တွေ့ရှိချက်ကြောင့်တောက်ပစေသည်ကားအဘယ်သို့ပါပဲ။ ငါကဖုနျစုရဲ့နေချိန်မှာ clean မှကြိုက်တယ်။ ငါအရည်အသွေးကို duster နှင့်အတူအာကာသပတ်ပတ်လည် သွား. , ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့အားလုံးမြင့်မျက်နှာပြင်များအနေဖြင့်ဖုန်မှုန့်အရာအားလုံးကို, မည်သို့ပင်ကြောင့်ဒါဟာကြီးမားတဲ့အချိန်ချွေတာမယ့် (အောက်တွင်) အနည်းငယ်အားနည်းချက်င်ကသပ်ရပ်ငါ၏အရာအရပျကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ငါ့ကိုအားပေး, ငါ့ကိုဖုနျစု၏နာရီ get ငါ Nope miss.Cons င့်ဒေသများရရှိသွားတဲ့
Marco Di Vita - ဇွန်လ 2019 10
la Roborock s 50 smart robot vacuum cleaner, dopo mesi di utilizzo é risultata un ottimo prodotto, da quando lo uso mi ha cambiato la vita, non posso più vivere senza di lei. Veramente molto robusta ed efficiente, fa veramente il suo dovere, pulire bene le superfici di casa dalla polvere ed anche il lavaggio non dispiace anche non approfondito.Ovviamente non pensate che pulisceafondo tutta la casa, ma ogni qualvolta è possibile, bisogna pulire con i vecchi rimedi, per una pulizia ed igiene migliore ed ovviamente più approfondita usando prodottiedetersivi.la roborock s50 smart robot vacuum cleaner, ha diverse velocita di aspirazione,edevo dire che aspira molto bene,enon lascia nessun residuo di polvere nelle superfici dove transita per la pulizia.Costruita molto bene, robusta ed efficiente nel muoversi nei meandri dell’abitazione, ha molti sensori che gli permettono di evitare tutti gli ostacoli che si annidano all’interno delle abitazioni, tra cui tappeti, sedie, scale,emolti altri ostacoli, ha solamente due pecche, non riesceasuperare le tende ed i fili di corrente, quindi prima di avviare la Roborock smart robot vacuum cleaner,ecosigliato accertarsi di alzare le tende da terra di un 15 cmetogliere tutti i cavi presenti. Una cosa davvero eccezionale è che si può utilizzare l’aspirapolvere con il sistema wi fi, ciò significa che tramite la sua app installata sul telefono cellulare, si può controllareadistanza l’aspirapolvere,esi possono controllare tutti i suoi movimenti ed anche tutte le sue funzioni, grazie al sensore laser che si trova all’interno della torretta, la Roborock s50 smart robot vacuum cleaner scannerizza tutto il perimetro della nostra casa realizzando nell’app una piantina dettagliata della nostra abitazione. L’ App è molto ben fatta, con molte funzioni relative all’uso perfetto del prodotto.l’aspirapolvere, viene fornita di un pettine pulisci spazzola con una piccola lama nella parte superiore per tagliare i capellienumero due panni in microfibra, per il lavaggio di tutte le superfici, all,interno della confezione troviamo anche la vaschetta contenitore dell’acqua per il lavaggio del pavimento, che va inserita nel retro della Roborock s50 smart robot vacuum cleaner,acui tramite delle striscie in velcro, vengono attaccati i panni in microfibra per il lavaggio delle superfici dell’abitazione. Non è necessario inserire ogni volta la vaschetta lava pavimento, in quanto il prodotto funziona principalmente come aspirapolvere.In considerazione ed in conclusione di quanto sopra riferito, vi posso assicurare che, la Roborock s50 smart robot vacuum cleaner, è un valido aiuto ed un compagno instancabile nella pulizia dell’abitazione,apatto che non si pretenda una pulizia approfondita della prpria abitazione, in quanto, ancora ad oggi non vi esiste un prodotto ho elettrodomestico, che dispensi totalmente dalle faccende domestiche.Quindi vi consiglio vivamente l’acquisto, con il quale non riman perfetta
Samira - ဇွန်လ 2019 10
လုံးဝကြောင့်ကိုချစ်! ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ perfomances ထို့နောက် Roomba 980 ရှိပါတယ်! ဤမျှလောက်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအဘို့! mAh 5200, 250 m2, 2,5h, Pa 1800, 12 အာရုံခံ ... ဟုတ်တယ်, ညွှန်ကြားချက်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်တရုတ်တွင်ရှိပေမယ့်ကိုယ့်ကို YouTube ပေါ်တွင်7မိနစ်ညွှန်ကြားချက်များအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားမရှိ easels ပြောင်းလဲသွားတယ်နိုင်ပါတယ်ဒါက။ အကြှနျုပျ၏ "Kli-Mi" (ဟုတ်ကဲ့, သူမနာမည်တစ်ခု :-) ရှိပါတယ်) အင်္ဂလိပ်လိုဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ (သင်ကသင်၏အထုပ်ထဲမှာမရကြပါလျှင်) နှင့်ဟုတ်တယ်, သင်, သင် 1 USD သောအရာကိုကုန်ကျမည်ဒါကတစ်ခု adapter လိုအပ်လိမ့်မည်နည်း ... ငါသည်ငါ၏အပြားရှိဘယ်လောက်ဖုန်မှုန့်အံ့သြမိပါတယ်! Kli-Mi နှစ်ကြိမ်သည်အခြားနေ့ရက်ကိုလှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်သည်နှင့် dustbin အခါတိုင်းပြည့်ဝ၏။ သူမသည်အလွန်ထိရောက်သောသန့်ရှင်းရေး algorithm ကိုရှိပါတယ်,4ဖြီးအာကာသ dustbin အမြန်နှုန်းနှင့်သူမအခုဖြစ်ပြီးသူမကပြီးသားသန့်ရှင်းထားပြီးအဘယ်အရာကိုသင်သည်အဘယ်မှာသင့်မိုဘိုင်းအပေါ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူမတိုက်ခန်း၏ကျန်သန့်ရှင်းရေးနေစဉ်ဒီတော့သင်က, ဒါကသန့်စင်ခန်းထဲမှာဥပမာမီးဖိုချောင် သွား. , အချို့သောအခြားလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တာဝန်များစာရေးနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောမိခင်အဖြစ်ငါတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာနည်းပညာ၏ထိုသို့သောအကြီးအအပိုင်းအစအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်တယ်! ထိုသို့သောတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အထောက်အ! ငါအစောပိုင်းကဒီနည်းနည်းစုံလင်သော crature ဝယ်ကြပြီမဟုတ် sooo sory ဖြစ်၏။ ဒါဟာသိပ်လွယ်ငါ့အသက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Rodica - ဇွန်လ 2019 10
ငါ 1st ငါ့တိုင်းပြည်ကနေအများကြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်နှိုငျးယှဉျပွီးနောကျကဒီစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို ရွေးချယ်. နှင့် Amazon site ကို။ ကျနော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးယ်ယူ, တစ်ဦးက high-performance ကိုစက်ကိရိယာနှင့်တစ်ဦးအလွန်အဆင်ပြေစျေးနှုန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ, (2.5 ထံမှ -3စင်တီမီတာ) အလွန်ထူသောငါ၏အကော်ဇောကိုတက်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်tačiauစိုးရိမ် OR သောအရောင်မှောင်မိုက်အညိုရောင်ရှိဒါကငါ့အသားမွေးကျောဇောကျော်လွှားမယ်။ ပူးတွဲပါဓါတ်ပုံထဲမှာမပါဘဲမြင်ကြနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါ၏စက်ရုပ်လေဟာနယ်သန့်စင်အပေါင်းတို့, အလွန်ကောင်းစွာအဲဒီဒေသတွေမှာယူတာပဲသောကြောင့်ငါ၏အစိုးရိမ်မှုတွေအခြေအမြစ်မရှိဖြစ်ကြသည်။ (ကြီးမားသောစင်္ကြံ, မီးဖိုချောင်နှစ်ယောက်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူလေးခန်း,) ငါ၏အတပြင်လုံးကိုတိုက်ခန်းကိုဖုနျစု 83 မိနစ်ကြာနှင့်ဘက်ထရီတရားစွဲဆို 60% အဲ့ဒီအချိန်မှာ: ငါထူးဆန်းသောချွေတာရေးလျှပ်စစ်မီးစေသည်ဘယ်ငါ၏အစက်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ ငါမူရင်း Xiaomi က Mi စက်ရုပ်ဖုန်စုပ် 1st မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအကြံပြုဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဖော်ထုတ်ငါသာအသေးအဖှဲချို့တဲ့ရှိသည်။ အဆိုပါ rotary ဘေးထွက်ဖြီးထရံကိုဘေးမှာအလွန်ကောင်းစွာသန့်ရှင်းရေးပေမယ့်အခန်း၏ထောင့်မှာလျော့နည်းအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်။
Lomidrevo - ဇွန်လ 2019 10
The vacuum cleaner measures 345 x 345 x 96 mm and weighs 3.8 kg. The plastic surface of the white color is decent, and you can not see the dust on it. It is equipped witha5200 mAh battery,atriple processor and 12 sensors. These include, for example, laser LDS distance sensor, ultrasonic radar sensor, staircase detector, gyroscope, compass, and more. It has an engine with suction pressure of 1800 Pa. The impurities are trapped ina0.42 liter container that hasaHEPA filter to capture even the finest dust grains.At the top of the robot is LDS sensor, in the front movable bumper. The top lid can be easily folded to reach the waste container. There are two brushes for cleaning, the main one is located in the middle of the bottom, the side brush is located on the right side.Charging the vacuum cleaner is simple, just put it back for the first time to the docking station’s induction surfaces and the robot starts charging. All other charges are already running automatically as the robot always starts and ends in the docking station.It has no problems with various surfaces, it can move on hard floors and regular carpets. I did not have the opportunity to test the long hair carpet. The HEPA filter in the waste container is of good quality, no smoke is around it and it does not penetrate into the bowl of the vacuum cleaner. Vacuuming is systematic, not chaotic, as with other vacuum cleaners. First, the Mi Robot Vacuum Cleaner runs the circumference of the room and then moves from side to side in straight S-lines. The vacuum cleaner uses SLAM technology, which means simultaneous localization and mapping. This technology is used in autonomous cars.The battery lasts very long. The robot sucks about 1 m² per minute and it discharge about 0.5% of the battery / m². The manufacturer states that the robot can handle up to 250m2 / 150min onasingle charge. If the battery has only 20%, it will return to the station to charge it. After recharging to 80%, the cleaning will resume.You can use Mi Home app to control the robot, which is available on both Google Play and the App Store. When you start and sign in, you can choose to connect to Chinese or US servers. I recommend choosing Chinese because the American version has significantly fewer features. However, you do not have to worry about the language barrier because the Chinese environment is also available in English. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner is an intelligent, trouble-free and reliable robot vacuum cleaner, which makes itagreat help to the home. Thanks to the updates, Mi Home is already working in English and the robot can communicate in the same language. The competition is much more expensive than the Xiaomi robotic vacuum cleaner. The competitor is, for example, iRobot Roomba 896 for 599 euros. . If you decide to buyavacuum cleaner abroad, it can be purchased even under half of the Roomba vacuum price. Has some problems with Wi-Fi. Sometimes the map will not show because of weak Wi-Fi signal.
Xiaomi က Mi စမတ် Air ကိုစင်ကြယ်စေ HEPA filter ကို (20 - 40 m2 နေရာများ)
Xiaomi က Mi ROIDMI F8 ကြိုးမဲ့, လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်း
ဖုန်း gadget ကအတူ Xiaomi က Giiker Rubik ရဲ့တုံး